10 / 07 / 2021 10 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 158 Views စာ0မှတ်ချက် ဒိန္းမတ္, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ, ယူရို, ယူရို 2020, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, ဘောလုံးသမား, Gareth SouthGate, ဟယ်ရီကိန်း, အီတလီ, Lego, Lego ဒဏ္Myာရီ, ဥပဒေ, LEGOLAND ဒဏ္MYာရီ, LEGOLAND ဝင်ဆာ, LEGOLAND ဝင်ဆာအပန်းဖြေစခန်း, ဒဏ္.ာရီ, ဒဏ္Myာရီ - ဒဏ္Myာရီပုံပြင်များကမ္ဘာ, Raheem Starling
လာမည့်ယူရို ၂၀၂၀ နောက်ဆုံးအဆောက်အအုံကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် LEGOLAND Windsor Resort သည် Miniland တွင်အထူးပြပွဲတစ်ခုနှင့်ပါ ၀ င်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
မနက်ဖြန်ရဲ့ယူရို ၂၀၂၀ နောက်ဆုံးမတိုင်မီ LEGOLAND Windsor မှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်နာများဟာကိုင်တွယ်ပုံရတယ် ဖောင်းပွ အပန်းဖြေစခန်း၏အုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော Miniland anရိယာကိုအင်္ဂလန်နှင့်အီတလီအကြား ၀ င်ရောက်ပြသခြင်းကိုမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံစလုံးအလံ၏ပုံစံများသည်အပန်းဖြေစခန်းအားလူများအားလုံးမြင်စေရန်ရှင်းလင်းသောကြောင့်ဂရတ်တောင်ဂိတ်၊ ဟယ်ရီကိန်းနှင့် Raheem Sterling တို့၏အတိုင်းအတာသုံးခုကိုခြယ်သထားသည်။ တစ်ခု partစိတ်ဝင်စားစရာမှာအုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောဘောလုံးဖြစ်သည် Lego အသုံးပြုရန်ကိန်းဂဏန်းများ Billund အတွက်ပိုကြီးတဲ့ရွေးချယ်စရာ.
အင်္ဂလန်အမျိုးသားအသင်း၏သူရဲကောင်းများဖြစ်သော Gareth Southgate၊ Harry Kane နှင့် Raheem Sterling တို့ကိုတွေ့ရသည် Lego ဒီတနင်္ဂနွေယူရို -2020 ဗိုလ်လုပွဲမတိုင်မီ အိမ်ပြန်လာပြီ ? pic.twitter.com/APSAQdQqI1
- လီဂိုလ်လန်ဝင်ဆာ (@LEGOLANDWindsor) ဇူလိုင်လ 9, 2021
မျက်နှာပြင်မည်မျှကြာမည်ကိုအတိအကျမသိရသေးပါ။ သို့သော်နောက်ဆုံးရလဒ်ပြီးနောက်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ၎င်းသည်အပြီးသတ်ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်မြင်ချင်လျှင် LEGOLAND Windsor ကိုအမြန်ဆုံး၊ ဖြစ်နိုင်သမျှတောင်လုပ်ပါ Mythica အသစ်ကိုစူးစမ်းပါ သငျသညျရှိနေတုန်းရိယာ။
၏အခြားဒေသများ Lego အုပ်စုအပါအ ၀ င်၊ Lego Ideas နှင့် ရေးရာလှုပ်ရှားမှု။ ကျနော်တို့ကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် Lego အုပ်စုသည်ဒိန်းမတ်အသင်း၏ရှုံးနိမ့်အပြီးတွင်ဗိုလ်လုပွဲအတွက်နောက်ထပ်အထောက်အပံ့များကိုပြသသည်။
← LEGO Ferrari တံဆိပ်သည်အလျင်မြန်ဆုံးအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောယာဉ်ဖြစ်သည်
ဘယ်ဟာ Disney ရဲတိုက်လာမယ့် LEGO ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်? →